Fudan University Shanghai Cancer Center - Siansa sy Teknolojia Technology Doneax any CO., LTD
Fudan University Shanghai Cancer Center (FUSCC) dia iray amin'ireo vondrona fitantanana tetibola eo ambanin'ny Vaomieran'ny fahasalamana nasionaly. Ny sampana fananganana mpiambina naorin'ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny Vaomiera Nasionaly momba ny fahasalamana ary ny Governemantan'ny Vondrom-pokonolona any Shanghai. Niorina tamin'ny 1 martsa 1931. Ny FUSCC dia nanjary hopitaly ambony ambaratonga-A nirotsaka tamin'ny fampidirana ny fampiharana ara-pahasalamana, fanabeazana ara-pitsaboana, fikarohana onkolojika ary fisorohana homamiadana.
Tamin'ny 4 desambra 2018 dia nambaran'ny Vaomieran'ny Fahasalamana Nasionaly ho toy ny andiany voalohany amin'ny famaritana fivontosana sy fitsaboana amin'ny hopitaly manara-penitra.
Tamin'ny faran'ny taona 2019, ny hopitaly dia nanokatra fandriana maherin'ny 2000. FUSCC dia misy departemanta enina amby roapolo: Departemantan'ny fandidiana lohandoha & vozona, departemantan'ny fandidiana amin'ny nono, departemantan'ny fandidiana thoracic, departemantan'ny fandidiana gastric, departemantan'ny Fandidiana Colorectal, Departemantan'ny Urolojia, Departemantan'ny fandidiana pancreatic, Departemantan'ny fandidiana Hepatic, Departemantan'ny Neurosurgery, Departemantan'ny fandidiana taolana malemy sy tazo maloto, Departemantan'ny Oncology Gynecologic, Departemantan'ny onkolojia fitsaboana, Centre Radiotherapy, Departemantan'ny TCM-WM Integrated Oncology, Departemantan'ny fitsaboana feno, departemantan'ny fanatoranana, departemantan'ny fitsaboana fitsaboana, departemantan'ny patolojia, departemantan'ny fivarotam-panafody, departemantan'ny laboratoara klinika, departemantan'ny endoscopy, departemantan'ny diagnostika ultrasound, departemantan'ny radiôdiagnostika diagnostika, departemantan'ny fitsaboana nokleary, sampana kardio- Fiasan'ny havokavoka, ary ny departemantan'ny fitsaboana ara-pahasalamana klinika.
Ao amin'ny FUSCC, ny onkolojia sy ny patolojia dia ekena amin'ny fomba ofisialy ho fitsipi-pifehezana akademika lehibe avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena; oncology, pathology ary TCM-WM Integrated Medicine, ho fifehezana klinika nasionaly manan-danja; ary onkolojia an-tratra, radiotherapy, patolojia, ho fitsipi-pifehezana klinika lehibe eo ambanin'ny Vaomieran'ny Fahasalamana Nasionaly. Ny vondrona fikarohana ifotony sy klinika momba ny homamiadan'ny nono dia voatonona amin'ny fomba ofisialy ho ekipa manavao ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Raha ara-dalàna, ny FUSCC dia nahazo alàlana hanana ivon-toeram-pitsaboana telo amin'ny onkolojia, radioterôma ary onkolojia nono, ary indrindra indrindra manana ivon-toeram-pitsaboana roa ho laharam-pahamehana amin'ny fivontosan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny tratra. Ny patolojia dia ekena ihany koa amin'ny fomba ofisialy ho fitsipi-pifehezana ara-pahasalamana lehibe ao amin'ny tanàna; ny oncology, pathology, radiology, oncology gynecologic ary oncology thoracic, ho fifehezana manan-danja dimy, izay mifandray amin'ny Shanghai Pathology Quality Control Center, Radiotherapy Quality Control Center, Cancer Chemotherapy Quality Control Center ary Shanghai Anticancer Association.